About us - Quanzhou Youhottest ingubo Co., Ltd.
I-Quanzhou Youhottest Garment Co., Ltd.yibhizinisi lesimanje nge ukwakhiwa, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa nokuthengiswa,eyasungulwa ngo-2010, futhi itholakala eQuanzhou City China, okuyindawo yokukhiqiza eyiNhlokodolobha yezingubo. 10,000ukukhiqizwa kwama-pcs ngenyanga. Ngamazinga ayo aqinile wekhwalithi, ithimba lokuthuthukisa elisebenza kahle kanye nohlelo lokuphatha oluphelele, siba ngomunye wabathengisi bezingubo zokulala noma amaphijama abadume kakhulu abavela eChina. Sinikeze insizakalo ye-OEM / ODM yemikhiqizo ethile edumile evela emhlabeni wonke.Ukugxila kwe-Youhottest ku-Sexy Lingerie, izingubo zokulala zikasilika, ukugqoka kwabesifazane neminye imiklamo ethandwayo iminyaka engaphezu kwengu-10. Abahlinzeki bethu bezinto ezibonakalayo baqeqeshiwe futhi bahlangana nenkampani efayo efanelekayo noma inkampani yokuphrinta okungumshwalense obaluleke kakhulu wekhwalithi yemikhiqizo yethu. Silangazelela ukuthuthukiswa kanye nobudlelwano bebhizinisi lamakhasimende namakhasimende avela emhlabeni wonke.Ukuvakashelwa kwakho kuzokwamukelwa ngemfudumalo!
• Ikhwalithi ephezulu yokuphamba nokulingana okuhle
• I-International Fashion Design nombala
• Ukulethwa ngesikhathi nentengo enengqondo
• Ulayini wokukhiqiza ofanayo kanye nokuphathwa
• Isevisi yokuhwebelana namanye amazwe kanye nokushintshisana
• Thola ama-oda aphuthumayo futhi usinikeze nemikhiqizo yakho, sizozama konke okusemandleni ukubenza baphelele.
• Ngokwezidingo zakho, izinguquko nezidingo zakho, amaphijama ngamunye wesifazane angenziwa anembe kakhudlwana
• Singakusiza ukuthi ufake igama lomkhiqizo noma ilebula kumkhiqizo
• Yamukela usayizi wekhasimende nosayizi ojwayelekile
• Unganikeza nezithombe zakho ozithandayo, bese sizokwenzela izingubo ezifanele
1. Yini inani le-minimun oda le-oda ngalinye?
Inani le-minimun le-oda lezitayela zesitoko yi-USD $ 50, izindleko zokuthumela azifakiwe. Isitayela esixutshiwe siyatholakala, unga-oda isudi e-1 ngesitayela ngasinye, vele ufike ku- $ 50 isiyonke, isitayela esingekho esitokisini sizoba ngamasudi ayi-100 ngesitayela ngasinye
2. Ungayikhetha kanjani indlela yokuhamba / yokuhambisa ephumelelayo?
Sihlala sikuphakamisa indlela yokuhambisa eshibhile, ephephile futhi esheshayo. Nge-oda elincane elincane, sisebenzisa ikhuriya lomhlaba jikelele (i-DHL, i-EMS, i-TNT, i-UPS, i-DPEX, i-Aramex), uma inani lakho likhulu, singasebenzisa ukuthunyelwa komoya noma ukuthuthwa kolwandle
3. Kuthiwani ngesikhathi sokuhola?
Sizama konke okusemandleni ukukusiza ukuthi uthole izinto zakho ngokushesha okukhulu, i-itme yakho e-odiwe izofakwa bese ithunyelwa emahoreni angama-24 ngemuva kokuqinisekisa ukudluliswa kwemali yakho ngobuningi be-manll (ezintweni zesitoko). isikhathi sokulethwa sincike endaweni ohlala kuyo, Ngokujwayelekile, izofika ngezinsuku eziyi-3-10, zezinsimbi ze-OEM / ODM, izikhathi zixhomeke kwimininingwane ye-oda lakho, sizokwazisa isikhathi esilinganiselwe ngaphambi kokuthi i-oda lakho lifihlwe.
4. Kuthiwani ngenkonzo yokwenza i-pattem？
Sinikeza insizakalo ye-OEM kusukela ngo-2010, sinikezela ngekhwalithi ephezulu esivele ifakazelwe ngamakhasimende ethu woldwide namaphesenti emakethe. singenza i-pattem making emahoreni angama-24 uma impahla ingumfundi wethu
5. Ngingathola isaphulelo?
Yebo. Ngama-oda amakhulu namakhasimende aqotho angajabulela izaphulelo ezinengqondo.